China Duvet fonosana fonosana sy ondana ary seza fandriana Microfiber ary kojakojam-pandriana Queen sy mpanamboatra fatoriana mpanjaka | Hefei Super Trade
Habe Mpanjakavavy (90 "x90") na Mpanjaka (104 "x90")
Fitaovana Fandraisana lamba 110GSM Microfiber
Fandrefesana--- Ny fonosana Duvet feno habe / haben'ny mpanjakavavy miaraka amin'ny fikatonan'ny zipper, fonosana malefaka miampy fonosana 3 farantsa (1 fonosana Duvet + 2 ondana), 90x90 santimetatra NA 104x90 santimetatra
Lavorary Fitaovana maharitra sy malefaka --- lamba microfiber borosy 100% hanolorana fahalemena sy fampiononana miavaka mandritra ny taona rehefa mampiasa ianao. Ny fampiononana amin'ny torimaso tsara dia izay manandanja indrindra raha ny fonosana duvetety sy ny ondana. Eto ianao dia hahita safidy lehibe amin'ny fandriana fandriana microfiber, ao anatin'izany ireo fitaovana malefaka fanampiny manakaiky ny landihazo - Ny fonosana duvet hypoallergenic dia mitazona ny vatanao ho madio mba hiantohana torimaso mandry mandritra ny alina.
Ankoatr'izay, ny fonosana fonosana Duvet koa dia manana loko marobe koa, mba hahafahanao mandeha amin'izay tianao anio ary manova azy isaky ny maniry ianao.
Famolavolana fiarovana sy famonoana zipety - Ataovy izay hahazoana antoka ny duvette anao, ny lambam-pandriana ary ny fampiononana ao anaty efitrano tsy misy tomika. Asio tombo-kase haingana kokoa ny lamba firakotrao, ny mpampionona na ny duvet fa tsy ny fanidiana ny bokotra mahazatra mba hanafainganana ny fomba fanaovana ny fandrianao amin'ny fanidiana zipper lava.
Fikarakarana mora sy milina azo nosasana - Manasa mangatsiaka mitokana amin'ny milina malefaka / marefo. Mianjera amin'ny ambany. Ny natiora kofehy lamba fisehoana mahafinaritra sy lamaody fomba. Tsy mila ironing hitazonana temotra ketrona.
Teo aloha: pantamasy mandry ary akanjo bazaika amam-behivavy ary ny faran'ny ambany
Manaraka: lamba firakotra sy kojakojam-pandriana Microfiber
seza fandriana mpanjaka
Farafara fandriana amin'ny mpanjakavavy
Mpihazakazaka latabatra, Cover Milky Flannel Duvet, lamba famaohana an-dakozia, Lamba latabatra PEVA, Farafara fandriana microfiber, Fandriana volon'ondry coral,